Umaki: ukumaketha kwe-youtube | Martech Zone
I-Tag: ukumaketha kwe-YouTube
I-YouTube: Ungayihlinzeka Kanjani I-Ejensi Yakho noma Umthwebuli Wevidiyo Ukufinyelela Komsebenzisi Esiteshini Sakho
NgoLwesithathu, July 14, 2021 NgoLwesithathu, July 14, 2021 Douglas Karr
Futhi, ngisebenza nebhizinisi elishiya i-ejensi futhi ngisebenza nami ukukhulisa ukutholakala kwabo kwe-YouTube… futhi, futhi, i-ejensi ababesebenzisana nayo ingumnikazi wawo wonke ama-akhawunti abo. Bengilokhu ngikhala ngama-ejensi enza lokhu isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi manje nokweluleka amabhizinisi ukuthi angalokothi akwenze lokhu. Futhi ibhizinisi akufanele linikeze ukungena ngemvume nephasiwedi ukuphatha noma iyiphi i-akhawunti. Izindlela ezifanele
NgoLwesine, July 1, 2021 NgoLwesine, July 1, 2021 Douglas Karr
Kuyini ukumaketha ezinkundleni zokuxhumana? Ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala njengombuzo oyisisekelo, kepha kufanele ingxoxo ethile. Kunobukhulu obuthile kusu elihle lokukhangisa ngemidiya yezenhlalo kanye nobudlelwano balo obuxhumene namanye amasu wesiteshi njengokuqukethwe, ukusesha, i-imeyili neselula. Ake sibuyele encazelweni yokumaketha. Ukumaketha isenzo noma ibhizinisi lokucwaninga, ukuhlela, ukwenza, ukukhuthaza nokuthengisa imikhiqizo noma izinsizakalo. Imithombo yezokuxhumana i
Indlu Ephindwayo: Shayela iTraffic Engaphezulu Nemikhondo Ngale Nsizakalo Yokuqukethwe Yezindaba Zomphakathi Ezabekayo
Lwesine, Disemba 31, 2020 Lwesine, Disemba 31, 2020 Douglas Karr
Amabhizinisi, kufaka phakathi nelami, ahlala enza okuqukethwe okusha nokumangazayo kwamasayithi abo - kufaka phakathi amavidiyo, ama-podcast, nama-athikili. Ngenkathi ukudalwa kumangalisa, kuvamise ukuba nomjikelezo wempilo omfishane walokho okuqukethwe ngokuhamba kwesikhathi… ngakho-ke imbuyiselo ephelele ekutshalweni kokuqukethwe kwakho ayikaze ibonwe ngokweqiniso. Kungezinye zezizathu zokuthi ngicindezele amaklayenti ethu ukuthi acabange kakhulu maqondana nokwakha umtapo wolwazi wokuqukethwe kunokusakazwa okungapheli kokukhiqizwa kokuqukethwe. Kukhona
Ukumaketha kwe-YouTube: Kungani Kusesemqoka!
NgoLwesithathu, Februwari 22, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Sibambe umhlangano wesifunda wabadlala podcast ehhovisi lethu ukuxoxa ngokwanda kwamavidiyo kwi-podcasting. Kwakuyizingxoxo ezingakholeki - kusuka kubuchwepheshe obusha, izinselelo zobuchwepheshe, kuya kumasu wesikhathi sangempela samavidiyo omphakathi. Kwezinye izingxoxo akukho mbuzo obuziwe, ngabe kufanele ngabe senza ividiyo? Esikhundleni salokho bekukhuluma ngokuthi singayisebenzisa kanjani ividiyo ukuze ihambisane nemizamo ye-podcasting ngendlela ephumelela kunazo zonke. Njenge-podcaster eyodwa, uChris Spangle, umsindo nevidiyo
Noma ushicilela kwezinye iziteshi zevidiyo ezinjengeVimeo noma iWistia, kusengumkhuba omuhle ukushicilela nokwandisa ubukhona bebhizinisi lakho 'le-Youtube. I-YouTube iyaqhubeka nokuhola njengenjini yokusesha yesibili ngobukhulu njengoba abasebenzisi bacwaninga ukuthenga kwabo okulandelayo noma ukuthola ukuthi bangazenza kanjani izinto online. I-YouTube yayijwayele ukuba yiwebhusayithi yokwabelana ngamavidiyo emuva ku-2006, abantu babejwayele ukwabelana ngamakati abo namavidiyo ahlekisayo asekhaya. Eminyakeni eyishumi kamuva, kwenziwa amavidiyo